Dhageyso: Gabar eedeysay Mareykanka iyo Isra’il oo todobaad ku xiran Hargeysa. | XAL DOON
Home NEWS Dhageyso: Gabar eedeysay Mareykanka iyo Isra’il oo todobaad ku xiran Hargeysa.
Dhageyso: Gabar eedeysay Mareykanka iyo Isra’il oo todobaad ku xiran Hargeysa.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xarig bilowgii todobaadkan ay magaalada Hargeysa ugu geysteen Ciidamada Somaliland gabar lagu magacaabo Safiya Aadan Rooble oo eedeyn kulul u jeedisay Mareykanka iyo maamulka Yahuuda.
Sida wararku sheegayaan Ciidamada Somaliland oo wata gaadiidka dagaalka ayaa Axadii tagay hoyga ay Hargeysa ka degan tahay Haweeneydan, iyagoo si xoog ku soo kaxeystay waxeyna keensadeen mid kamid ah xabsiyada sida aadka ah loo ilaaliyo.
Saraakiil dhinaca amaanka ah ayaa sheegay in maamulka Muuse Biixi Cabdi uu qoonsaday shir Jaraa’id oo ay gabadha xiran u qabatay bahda Warbaahinta, taasoo ay kaga hadashay taageero ay u heyso dowladda Iiraan.
Axmed Aadan Rooble oo ay Walaalo yihiin Gabadha xoriyadii laga qaaday, ayaa Warbaahinta Soomaalida u sheegay ineysan jirin meel ay sharciga uga qoran tahay in la xiro qof eedeeya oo kaliya dalal shisheeye.
Mr. Rooble waxa uu sidoo kale sheegay in Haweeneyda xiran ay heysatay ilmo fara badan oo ay dhashay, Seygeedana uu ku maqan yahay Sucuudiga oo uu ka soo Cimreysanayo, isagoo sheegay in Gabadhu eheyd qof madaxa ka xnauunsaneysa.
Si kastaba, Safiya Aadan Rooble ayaa maalintii Isniinta laga qabtay Hargeysa, iyadoo xabsiga ku dhex Ciideysatay, mana jirto wali wax war ah oo ka soo baxaya dhinaca maamulka Somalialnd.
Halkan Hoose ka Dhageyso Codka Wiilka ay Walaalaha yihiin gabadha xiran: